Ifektri Yokusetha Igumbi Lokuhlala - Abakhiqizi begumbi lokuhlala baseChina, abahlinzeki
I-YF-H-807 Contemporary Italian Lacquered Designer Chest Of Drawers
Idizayini encane kodwa enhle ngaphezu kwakho konke enikeza isitayela esihle kakhulu futhi igxile ezingaphakathi ezivelele.
Ukubukeka okukodwa, ukuthinta okukodwa kwanele ukubona ikhwalithi yangempela. Lokhu kufakazelwa ngumklamo okhethekile, izinto ezikhethwe ngokucophelela…
I-YF-H-806 60 Inch Sideboard Buffet 4-Door Sideboard Ithebula Ikhishi Buffet
Isikhalazo Esintekenteke: Sigcizelelwe ngemigqa yejometri nesibambo esiphelile segolide, leli khabethe eliseceleni lijabulela ukunxenxa okubucayi nokunethezeka.
Igumbi lokuhlala le-YF-H-803 Large Buffet set
Kokubili isiqeshana esibalulekile sesitoreji segumbi lakho lokudlela kanye nendawo yokubonisa yezindawo zokubeka ukudla noma iziphuzo…
YF-H-802 omnene ingilazi tabletopm sideboard yesimanje ekhishini
Ngokuqedwa kwayo okucwebezelayo okumhlophe okuphezulu, imigqa elula ehlanzekile nokunqekuzisa okuhlukile kokuklanywa kwesimanje okuhlukile, le bhodi eseceleni enesitayela esimangalisayo inikeza indawo eningi yokugcina kanye nesisekelo esihle sokubonisa i-TV yakho noma izinto zokuhlobisa.
I-YF-H-801 IKhabhinethi Yesitoreji Esibekiwe eseceleni ngegolide
Ngazimbili zokhuni eziqinile nezenziwe kahle ngensimbi eqinile engagqwali ekuqedeni kwegolide ukuqinisekisa insizakalo yesikhathi eside iminyaka.
Amatafula ekhofi aphakeme asinikeza okuthile okuyigugu kakhulu futhi okuvame ukunganakwa: leso sitoreji esincane esengeziwe esivame ukwenza umehluko. Kungenye yezizathu zokuthi kungani amatafula ekhofi anamashalofu akhelwe ngaphakathi kanye nama-cubbies athandwa kakhulu futhi eziswa.
Gcina izinto zakho kude nasemehlweni ezivakashi zakho ngenkathi unikeza igumbi lakho lokuphumula indawo ephambili ezogcina isikhala sakho singagudluki. Ngetafula lethu lekhofi eliguquguqukayo eliphakeme lokuphakamisa phezulu, umhlobiso wakho wegumbi lokuhlala awusoze wafana.
Ithebula le-YF-H-802-2 Black Buffet 2 Doors & 3 Drawers
Ifaka isisekelo sensimbi engagqwali esicebile segolide, leli khabethe elimangalisayo le-sideboard linikeza ukuthintana okunesitayela, kwanamuhla endaweni yakho yokuhlala.
I-YF-H-805 High End Italian Designed Quilted Designer
Leli bhodi eliseceleni linomfanekiso oyinkimbinkimbi onensimbi engagqwali ethuthukisa noma yiliphi igumbi elinokuheha okunethezeka.